japanSamachar | जापान जानकारी | विदेशीहरूले जापानमा कोरोना भाइरस खोप लगाउने बारेको महत्वपूर्ण सूचना
(Japan) 14 th April | 2021 | Wednesday | 5:03:07 PM || (Nepal) 1:48:07 PM
World 138056789 49723 2972984 1697 111086321 106113
विदेशीहरूले जापानमा कोरोना भाइरस खोप लगाउने बारेको महत्वपूर्ण सूचना
POSTED ON : Monday, 15 February, 2021 | Views : 3514
जापानमा फेब्रुवरी १४ तारिख कोरोना भाइरसको खोप स्विकृत भएको छ । खोप स्विकृत लगत्तै जापानमा बुधवारबाट स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई खोप लगाउन सुरु गरिंदैछ ।
खोप लगाउने जापान सरकारको मापदण्ड अनुसार बृद्धबृद्धा, दिर्घरोगी पछि मात्र १६ बर्ष वा सो भन्दा माथी उमेरका व्यक्तिको पालो आउनेछ । यसरी सर्वसाधारणले खोप लगाउने पालो कुर्न अझै सामान्यतया तीन महिना कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस बाहेक जापानले देशभित्र नगरपालिका वा स्थानिय निकायमा नाम दर्ता गराएर अस्थाई वा स्थायी बसोबास गरिरहेका सबै बिदेशीको लागि खोप उपलब्ध गराउने बताएको छ । त्यो पनि जापानी सरह एकैपटक र निःशुल्क ।
तर अझैपनि जापानमा रहेका २२ लाख बिदेशीहरु खोप लगाउने प्रक्रियाहरुका केही प्रश्नमा अनुत्तरित वा जिज्ञासा राखिरहेका छन् । जापानमा पाचौं ठूलो जनसंख्याको रुपमा रहेका नेपालीहरु करिव १ लाखको संख्यामा रहेका छौं । यो अवस्थामा कोरोनाको खोप सम्वन्धि केही सामान्य प्रश्नहरूको जवाफ यहाँ समेटेका छौं । विश्वास छ यसबाट तपाईं र जापानमा रहनुभएका अन्य नेपालीहरुमा सहयोग पुग्नेछ ।
पहिलो खेपको रुपमा कोरोनाको खोप ४ लाख मात्रा फेब्रुवरी १२ तारिख शुक्रबार जापान आईपुगेको छ । खोप फेब्रुअरी १३ तारिख विज्ञ समितिबाट स्विकृत भएपछि जापान सरकारले औपचारिक रुपमा फेब्रुवरी १४ तारिख आम रुपमा लगाउन स्विकृत दिएको छ । यो सँगै बुधवारबाट चिकित्साकर्मीहरुलाई खोप लगाईने भएको छ । अन्य प्राथमिकता समूहहरूले आगामी अप्रिल १ भन्दा पहिले पहिलो मात्रा पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसपछिको प्राथमिकता समूहहरू क्रमबद्ध रूपमा अप्रिल १, १९५७ वा त्यो भन्दा अघि जन्मिएका भन्नाले मार्च ३१ २०२२ मा ६५ बर्ष पुग्ने वा सो भन्दा बढी उमेरकाहरुलाई लगाईनेछ ।
यसैगरी बृद्धबृद्धा हेरचाह केन्द्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई पनि प्राथमिकताको सूचिमा समावेश गरिएको छ । यस पश्चात भने आम रुपमा खोप लगाउन थालिनेछ ।
के विदेशी नागरिकहरूले जापानी नागरिकहरू जस्तै एकै समयमा खोपहरू प्राप्त गर्नेछन ? र जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको लागि प्राथमिकता हुन्छ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक प्रतिनिधिले भने जापानी नागरिकहरूसँगै बिदेशी बासिन्दाहरूले पनि खोपहरू एकैपटक लिनेछन । साथै, प्राथमिकता समूहमा विदेशी बासिन्दाहरूलाई जापानी नागरिकहरूको कोटीमै राखेर खोप दिइनेछ । उदाहरणको लागी दिर्घ रोग रहेका विदेशी निवासीले समान स्वास्थ्य समस्याहरु भएका एक जापानी व्यक्ति सरह प्राथमिकता पाएर खोप लगाउन सक्नेछन् ।
कस्ता भिषामा रहेका विदेशी बासिन्दा खोप लिन योग्य छन ?
जापानको आवाशिय अनुमतिपत्र (जाईर्यु कार्ड) प्राप्त भएका, जापानमा रहेका सबै विदेशीहरू वा जापानी भाषामा 'ज्युमिन्ह्यो' प्राप्त गर्ने सबै बिदेशीहरु खोप भौचर लिन सक्षम हुनेछन् । अर्थात् उनिहरुको घर ठेगानामा नै खोप लगाउन भौचर पठाईनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने कि जापानमा स्पष्ट रूपमा बस्ने सबै व्यक्ति खोपका लागि योग्य हुनेछन् ।
देशमा रहेका मानिसहरु जो देश निकाला भइरहेका छन ? वा जो बेरोजगार छन् र जापानमा सीमित समय बाँकी छ के उनिहरुले खोप पाउँछन् ?
सरकारले अझै पूनरावलोकन गरिरहेको छ कि यस्तो परिस्थितिहरूमा व्यक्तिलाई कसरी खोप प्रक्रियामा समेट्न सकिन्छ । अधिकारीहरुले अहिलेसम्म यस्ता अवस्थामा रहेका कसैलाई पनि खोप दिन सकिन्न भन्ने जवाफ नदिएकाले उनिहरु कसरी प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ भन्नेमा नै काम गरिरहेको देखिन्छ ।
खोप लिनको लागी कति शुल्क तिर्नु पर्छ, खर्च कति लाग्छ ?
खोपहरू जापान सरकारको पूर्ण लागतमा वितरित गरिनेछ । सरकारले सार्वजनिक कोषहरू मार्फत खोपको व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारिसकेको छ । यसको अर्थ जापानी वा बिदेशी नागरिक जो खोप लगाउन योग्य हुनेछन् उनिहरुले निःशुल्क खोप लगाउन पाउनेछन् ।
एक व्यक्तिले कति मात्रा खोप लगाउनु पर्छ वा लगाउन पाउँछन् ?
प्रत्येक व्यक्ति जापान सरकारको वर्तमान खरीद योजना अन्तर्गत दुई मात्रा खोप प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अर्थात् एक पटक खोप लगाएको तीन साताको अन्तरालमा अर्को मात्रा गरि जम्मा दुई पटक खोप लगाउनुपर्नेछ ।
खोप लगाउने बारेमा कसरी सूचित गरिनेछ र म कहाँ गएर खोप लगाउन पाउँछु ?
खोप अवधि भन्दा पहिले बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको नगरपालिका सरकारबाट खोप भौचर पठाइनेछ । सामान्यतया, भौचरहरू उनीहरूको निवास प्रमाणपत्रमा 'रजिष्टर' गरिएको घरमा पठाइन्छ । खोप लिन योग्य छ कि छैन भनेर जाँच गरेपछि, बासिन्दाहरूले स्वास्थ्य संस्था वा सरकारले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको एक वेबसाइटको प्रयोग गरी जापानभरबाट आफुले खोप लगाउन जानुपर्ने चिकित्सा संस्था वा खोप केन्द्र भेट्टाउन सक्नेछन । त्यस पश्चात खोप लगाउन जानु अघि फोन वा 'अनलाईन' मार्फत खोप लगाउने दिन र समय निर्धारण (आरक्षण) गरेर जानुपर्नेछ ।
स्वास्थ्य हेरचाहकर्मीहरु जसले पहिले नै खोप प्राप्त गरिसकेका छन् उनीहरुलाई पनि नगरपालिकाले भौचर पठाउनेछ, तर उक्त भौचर प्रयोग गर्नु हुँदैन । किनभने चिकित्साकर्मीहरुले फेरी खोप लगाउनु आवश्यक पर्नेछैन । उनीहरूलाई आफ्नो काम गर्ने ठाउँ र खोपको बारेमा जानकारी गराईनेछ । जहाँ गएर उनिहरुले आम व्यक्तिलाई खोप लगाउने वा मद्दत गर्नेछन् ।
भौचरहरू र खोप बारेको अनलाईनहरुमा कुन भाषाहरू प्रयोग हुनेछन ?
अहिलेसम्म जापानी बाहेक अन्य भाषाहरूको लागि कुनै प्रावधानको पुष्टि भइसकेको छैन । तर जापानको कुनैपनि स्थानका बासिन्दाहरूले उनीहरूको बसोबास सम्बन्धी जानकारीका लागि उनीहरूको स्थानीय सरकारको वेबसाइट जाँच गर्नुपर्नेछ ।
नगरपालिका सरकारहरूले अन्य भाषाहरूमा वा बहुभाषिक परामर्श सेवाहरूको अतिरिक्त विवरणहरू राख्न सक्नेछन् । बिदेशी वासिन्दाको धेरै बसोबास रहेका टोकियोका कयौं वार्डहरु सहित देशका विभिन्न प्रमुख शहर क्षेत्रमा अँग्रेजी सहितका कयौं भाषामा यस्तो जानकारी उपलब्ध गराउने तयारी भईरहेका खवर छन । तर स्पष्ट रुपमा जापान सरकारले जापानी बाहेकको बहुभाषामा जानकारी उपलब्ध गराउनेबारे केही बताईसकेको छैन ।
समाचारहरुमा खोप माई नम्वर व्यक्तिगत सामाजिक सुरक्षा र कर नम्बर प्रणालीमा समावेश गरिने बताईएको छ । के खोप लगाउनको लागि माई नम्वर कार्ड प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ?
होईन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ कि कोहीपनि व्यक्तिलाई 'माई नम्वर कार्ड' अनिवार्य प्रस्तुत गर्न बाध्य पारिनेछैन । यसको सट्टामा व्यक्तिहरूले चालक इजाजतपत्र जस्ता व्यक्तिगत पहिचानको साथ खोपहरु लिन आफ्नो खोप भौचरको साथमा उपस्थित भए हुनसक्ने व्यवस्था मिलाईंदैछ ।
होईन, कोरोना भाइरस खोपहरू अनिवार्य छैनन्, र व्यक्तिको सहमतिमा मात्र उनीहरूलाई यस बारे राम्रोसँग जानकारी भए पछि लगाईनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार खोप लिने व्यक्तिलाई पनि खोपका प्रभावहरू र 'साइड इफेक्ट'को जोखिम दुबै जानकारी दिई स्वीकृति मागिनेछ । खोपहरू प्राप्तकर्ताको सहमति बिना लगाउने काम गरिनेछैन ।
यस बाहेक तपाईका कुनैपनि जिज्ञासा भएमा कमेण्ट गर्नुहोला, हामी तपाईका जिज्ञासाको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्नेछौं । जानकारीमूलक यो सामग्री जापानमा रहनुभएका आफ्ना निकटका व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नसक्नुहुनेछ ।
स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय, नगरपालिका सरकारहरू र स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटको जानकारीको आधारमा तयार, माईनिची सिम्बुन ।